Ma dhab baa in Robert Lewandowski uu wakiilkiisa ku amray inuu ka shaqeeyo sidii uu ugu biirin lahaa Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 02 Dis 2021. Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa warinaya in Robert Lewandowski uu baxsad usoo yahay kooxda Real Madrid isagoo xagaaga soo aaddan ka dalban doona naadigiisa Bayern Munich inay fasaxaan si uu La Liga ugu dhaqaaqo.
Wargeyska AS ee kasoo baxa dalka Spain ayaa sheegay in Lewandowski uu wakiilkiisa ku amray inuu dalaal ka noqdo dhammeystirka heshiis uu laacibkan ugu dhaqaaqayo Madrid.
Pini Zahavi oo ah wakiilka weeraryahanka reer Poland ayaa sidoo kale wakiil u ah David Alaba, waxaana uu 78-sano jirkan Yuhuudiga ah ka shaqeeyay inuu Alaba ku biiro Los Blancos suuqii xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, Lewy iyo Real Madrid ayaa xiiso soo jireen ahi ka dhaxeeyaa, waxaana uu haatan 33-jirkan wakiilkiisa ka dalbaday inuu ka dajiyo Santiago Bernabeu, inkastoo aanan la ogeyn go’aanka Bayern maadaama uu Allianz Arena ku joogo qandaraas dhacaya xagaaga 2023.